Inkqubo yemfundo e-Afghanistan. Uluhlu lwezikolo zamazwe ngamazwe eKabul - ALinks
Ukuba ukhona uceba ukufudukela eAfghanistan nosapho lwakho kunokuba kufuneka ujonge inkqubo ye-Afghanistan. Kule nqaku, siza kuxubusha ngenkqubo yesikolo kunye nemfundo e-Afghanistan.
I-Afghanistan iphakathi kwamazwe anamazinga aphantsi okufunda nokubhala ehlabathini. Kodwa namhlanje abaninzi iinkqubo sele iqalile ukuphucula inqanaba lokufunda nokubhala elizweni. I-UNICEF nayo ithathe amanyathelo amaninzi yaza yaseka iZikolo eziSekelwe kuLuntu (i-CBS) kunye namaZiko okuFunda aKhawulezileyo (ALC) ajolise kumantombazana nabantwana abasuka kwiindawo ezihlelelekileyo.
Inkqubo yemfundo eAfghanistan iqala ukusuka Inkulisa kwaye kude kube kwibanga le-12. Inkqubo yemfundo eAfghanistan yahlulwe yangamacandelo amathathu. Eyokuqala yimfundo yasePrayimari eyiminyaka emi-6 emva koko kuza iMfundo ePhakathi eyiminyaka emi-3 kwaye inqanaba lokugqibela lokufunda yiMfundo yesiSekondari ekwayiminyaka emi-3. Kukho ezinye izikolo ezilungileyo zamanye amazwe eAfghanistan ezinabafundi abavela kwihlabathi liphela.
Inkqubo yemfundo e-Afghanistan
Inkqubo yeMfundo ePrayimari eAfghanistan ziindidi ezimbini. Enye yimfundo yenkolo enikezelwa kwizikolo zonqulo zamaSilamsi kwaye luxanduva lwabefundisi kwiimosque. Okwesibini yimfundo yokufunda kwizikolo zikarhulumente. Urhulumente wase-Afghanistan ubonelela ngemfundo yasimahla kuphela kude kube kumabanga aphantsi. Umntwana ophakathi kweminyaka esixhenxe ukuya kweli-7 ufunda kwizikolo zaseprayimari. Bafundiswa iziseko zokufunda, ukubhala, izibalo kunye nenkcubeko yabo yesizwe.
Emva kweminyaka emithandathu yemfundo yaseprayimari, kuza iminyaka emithathu yesikolo esiphakathi. Kwisikolo samabanga aphakathi, abafundi bayaqhubeka nemfundo yabo yendlela yokufunda. Kunyanzelekile ukupasa iimviwo ukuba abafundi banqwenela ukuqhubekeka nokufunda.
Kwizikolo zamabanga aphakamileyo abafundi banokukhetha phakathi kokuqhubeka nendlela yokufunda kangangeminyaka emi-3 enokuthi ikhokelele kwiyunivesithi, okanye bafunde izifundo ezinje ngezolimo ezisetyenziswayo, iaeronautics, ubugcisa, ezorhwebo noqeqesho lootitshala endaweni yoko.
Izikolo zamanye amazwe eKabul
Isikolo samanye amazwe saseAfghan (AIS)
IndawoIsitalato # 6, iQala-e-Fatihullah, Afghanistan (Kabul)
mfono: 93 (0) 789 799 114
iintlawulo: US $ 180 - 270 ngekota nganye
Izikolo zamanye amazwe zaseFrance eKabul
Iziko loKwakhiwa kweFrançais e Afghanistan (CEFA)
Indawo: Ebn-e-Sina, Afghanistan (IKabul)
iintlawulo: Buza esikolweni
Izikolo zamazwe aseJamani eKabul
Isikolo samabanga aphakamileyo iAmani
Indawo: I-Afghanistan (iKabul)
mfono: 07631 / 170659
Inkqubo yokwamkelwa kunye nobhaliso kwezi zikolo zamanye amazwe zinokwahluka kwizikolo ngezikolo. Izihlalo zilinganiselwe kwaye ukhetho lunikwa abafundi ngokusekwe kubuzwe. Izifundo zibiza kakhulu xa kuthelekiswa nezikolo zalapha ekhaya kodwa izikolo zamanye amazwe zibonelela ngemigangatho ephezulu yokufunda, ziqhayise ngobukhulu beeklasi, amazinga okuqala, kunye nakwamanye amazwe. Ezinye izikolo zineendawo zokubhoda kodwa uninzi lwezi zibonelela ngeeklasi zasemini kuphela.
umthombo: isifundaro.com, expat-quotes.com
Inkqubo yeSikolo Afghanistan